Translate Myanmar (Burmese) to Belarusian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Belarusian, Myanmar (Burmese) to Belarusian translations, Myanmar (Burmese) to Belarusian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Вітаю, як ты
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Ці ёсць хто-небудзь?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Я люблю цябе сапраўды так шмат
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Колькі гэта гамбургер каштуе?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Ці можаце вы назваць мне таксі?
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Я зацікаўлены
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Мой палёт быў адкладзены
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Я тут для бізнесу
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Добры дзень, мяне завуць
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Я прашу прабачэння, але я замужам
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Я хацеў бы спытаць вас
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Вы можаце ўзяць мяне ў аэрапорт?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Які час прама цяпер, калі ласка?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Дзе знаходзіцца бліжэйшы паліцэйскі ўчастак?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Ці магу я ўзяць свой тэлефон зарадная прылада, калі ласка?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Ці можаце вы мне дапамагчы?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Замоўце мне выпіць, калі ласка?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Колькі каштуе?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး У мяне алергія на глютен
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ выклік лекара
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Ці ёсць лекар?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Ці магу я патэлефанаваць?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Патэлефануеце мне, калі ласка, ваш бос.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Гэта месца вельмі прыемна
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Адвязіце мяне ў гатэль, калі ласка,
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Што такое мой нумар?